Zimbabwe says election is clean; opposition is skeptical - Deseret News
By Associated Press Jul 31, 2018, 11:50pm MDT
Share All sharing options for: Zimbabwe says election is clean; opposition is skeptical
People wait in a queue to cast their vote at a polling station in Harare, Zimbabwe, Monday, July 30, 2018. Zimbabweans on Monday voted in their first election without Robert Mugabe on the ballot, a contest that could bring international legitimacy and investment or signal more stagnation if the vote is seriously flawed. (AP Photo/Bram Janssen) Bram Janssen
The last of the voters cast their ballots at a polling station near Harare, Zimbabwe, Monday July 30, 2018 . Polls have closed in Zimbabwe's historic election, the first since the fall of longtime leader Robert Mugabe. Millions have voted, turnout was high and the day was free of the violence that marked previous elections. (AP Photo/Mujahid Safodien) Mujahied Safodien
People look at results placed outside a polling station in Harare, Zimbabwe, Tuesday, July 31, 2018. Zimbabweans on Tuesday awaited the first results from an election that they hope will lift the country out of economic and political stagnation after decades of rule by former leader Robert Mugabe. (AP Photo/Tsvangirayi Mukwazhi) Tsvangirayi Mukwazhi
A Zimbabwean woman reacts to the results posted outside a polling station in Bulawayo, Zimbabwe, Tuesday July 31, 2018. Zimbabweans on Tuesday awaited the first results from an election that they hope will lift the country out of economic and political stagnation after decades of rule by former leader Robert Mugabe.(AP Photo/Jerome Delay) Jerome Delay
A Zimbabwean checks the results posted outside a polling station in Bulawayo, Zimbabwe, Tuesday July 31, 2018. Zimbabweans on Tuesday awaited the first results from an election that they hope will lift the country out of economic and political stagnation after decades of rule by former leader Robert Mugabe. (AP Photo/Jerome Delay) Jerome Delay
A torn campaign poster of Zimbabwean President Emmerson Mnangagwa is seen on a wall in Bulawayo, Zimbabwe, Tuesday, July 31, 2018. Zimbabweans on Tuesday awaited the first results from an election that they hope will lift the country out of economic and political stagnation after decades under former leader Robert Mugabe. (AP Photo/Jerome Delay) Jerome Delay
A man points at results placed outside a polling station in Harare, Zimbabwe, Tuesday, July 31, 2018. Zimbabweans on Tuesday awaited the first results from an election that they hope will lift the country out of economic and political stagnation after decades of rule by former leader Robert Mugabe. (AP Photo/Tsvangirayi Mukwazhi) Tsvangirayi Mukwazhi
HARARE, Zimbabwe — Zimbabwe's election took an uneasy turn Tuesday when the opposition alleged results were not posted outside one-fifth of polling stations as required by law, and the electoral commission said the impatient nation would have to wait longer to learn who will be its next president.